Waa maxay qiimaha wareejinta? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks qiimaha sii daayo
qiimaha sii daayo
Waa maxay qiimaha bedelka?
Der qiimaha sii daayo wuxuu inta badan la xidhiidha macaamilka kireysiga. Qiimaha hadhaaga ah ee hantida la kireysto wali waxay leedahay dhamaadka erayada halkan waxaa loogu talagalay qiimaha bedelka. Qiimaha hadhaaga ah waa qiimaha uu qofku kiro ahaan u qaadan karo hantida la kiraysto dhammaadka mudada kireysiga. Qiimaha qiimaha haraaga ah waxaa horay loogu qeexay waqtiga dhamaadka qandaraaska waxaana lagu diiwaan geliyey qandaraaska kireysiga. Si kastaba ha noqotee, muddada heshiiska ijaarka ah, xaalado badan ayaa laga yaabaa inay yareeyaan qiimaha shayga la kiraystey, sidaas awgeedna waxay noqon kartaa waxyeellada kireystaha. Dhamaadka ereyga, kireystuhu wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu beddelo shayga la kiraysto ama xitaa isagoo u iibiya qof kale.
Si kastaba ha ahaatee, qiimaha bedelku wuxuu leeyahay macnaha qaybta amaahda.
Bixinta waxaa lagu keydinayaa ganacsiga amaahda
Qiimaha bedelka ayaa sidoo kale ah ereyga ganacsiga amaahda, laakiin waxa uu leeyahay macnayaal kala duwan waxaana uu door ka qaataa bedelka amaahda ama haddii ay dhacdo dib u dhiska deynta. Marka laga hadlayo xalinta credit, mid ama in ka badan oo amaah ah ayaa la isugu dari karaa mid ama in ka badan amaaharro ah amaah badan.
Sidaa darteed bangiyadu waxay doortaan dib-u-habayn deynta ama xallinta deyn bixinta, maadaama ay kuwani bixiyaan faa'iidooyin taxadar leh. Dhinaca kale, waxaa jira aragti guud oo ku saabsan xaaladda dhaqaale, dhanka kale, kharashka deynta ayaa hoos loo dhigayaa, sababtoo ah sicirka dulsaarka bishiiba hoos ayuu u dhacayaa qadarkuna waa yaraa. Xaaladaha badankood, muddada dib u furashada ayaa sidoo kale la soo gaabin. Ka hor inta aan la wareejin karin, dayn qaadaha waa inuu soo gudbiyaa arjiga deymiyaha. Inta lagu gudajiro wadaxaajoodka, qiimaha bedelka hadda waa la xalin karaa.
Qiimaha bedelka waa qadar xisaabeed waxayna muujineysaa inta uu le'eg yahay weli wakhti go'an muddada heshiisku socdo. Dakhliga soo koobista wuxuu ka kooban yahay waxyaabo badan. Tani waxaa ka mid ah deynta joogtada ah ee hadda iyo sidoo kale dulsaar ah in lagu soo rogi doono taariikhda la doonayo in dib loo furo. Hase yeeshee, kharashka kaashka ah ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku jiro kharashka shaqo ee suurtagalka ah iyo sidoo kale khidmooyinka maamulka ee ay bixiyaan deymanka hadda jira. Qaar ka mid ah dhexdhexaadiyeyaasha amaahda ayaa sidoo kale u baahan in dib loo bixiyo. Tani waa kiisaska leh dacaayado badan oo deynta ah marka deynta la joojiyo waqti hore. Qiimaha bedelka ah ee la wareejiyay waxaa bixiya bangiga aqbalaya amaahda amaahda. Iyadoo aan lahayn dammaanad, xallinta amaahda (credit credit) waa mid deg deg ah, oo aan loo dulqaadan karin, loona aanayn karin.
Dammaanadda waa in sidoo kale loo tixgeliyaa dammaanadda. Kuwani waa hantida loogu talagalay in lagu hubiyo in deyn-bixiyuhu uu dib u bixin karo amaahda dulsaarka ku-saleeysan muddada lagu heshiiyay. Deyn-bixiyeyaashu waxay dalbaan lacag-qaadasho haddii ay u tixgeliyaan deyn-bixinta khatarta ah ama haddii ay ka walwalsan yihiin in dayn-bixiyuhu uusan bixin karin amaahda haddii dayn-bixiyuhu aanu ku filnayn. Lacagta deynka leh ee dammaanadku waxay u baahan tahay wakhti dheeraad ah mana u tagaan si aan caadi ahayn marxaladdan. Xaaladda dammaanadda, maaha kaliya deyn bixiyaha beddelaya waa inuu noqdaa mid firfircoon, laakiin sidoo kale deyn bixiyaha asalka ah. Deyn-bixiyeha cusub wuxuu beddelayaa qandaraasaadka jira oo uu deynta ka qaato deynta hore. Deyn-bixiyeha hore wuxuu helayaa qiimaha wareejinta kaliya haddii uu deyn bixinta si buuxda ugu gudbiyo bangiga bedelka. Haddii bedelka deynka suurtagal ahayn, deyn bixiyihii hore ma helayo qiimaha bedelka, beddelka amaahda waxaa loo aqoonsan yahay inay ku fashilmeen.
Maqaalka horedaloolin xirfadeed